Ogaysiisyada Adeegga COVID-19 - Xarunta Caafimaadka ee Sadler
Ogaysiisyada Adeegga COVID-19
Xarunta Caafimaadka ee Sadler
Ku Deeq Online
Himilada, Aragtida & Qiimaha
Soo kabashada balwadda
Jawaabta Caafimaadka Bulshada
Dhimista Khidmada Liibaaniga & Codsiga
Qalbiga u qabo Sadler
Siyaabaha wax loo bixiyo – Qalbi u yeelo Sadler!
Cusboonaysiinta Helitaanka Tallaalka:
Ballamaha tallaalka ayaa la qorsheeyay ama dib baa loo qorsheeyey iyadoo la joogo sahayda tallaalka.
Tallaalka Moderna iyo Janssen waxay heli karaan dhammaan dadka waaweyn ee ka weyn da’da 18 sano.
Fadlan halkan iska hubi si aad u ballansato qiyaastaada 1aad ama ballanta xoojinta ama wixii macluumaad dheeraad ah wac 717-960-6901.
Cusbooneysii: Juun 14, 2022
Hadda, carruurta da’doodu u dhaxayso 5 ilaa 11 jir waxay xaq u leeyihiin inay qaataan tallaalka Pfizer-BioNTech COVID-19. Intaa waxaa dheer, CDC waxay ballaarinaysaa u-qalmitaanka tallaalka COVID-19 qof kasta oo da’diisu tahay 5 sano iyo ka weyn. CDC waxay hadda ku talinaysaa in carruurta da’doodu u dhaxayso 5 ilaa 11 sano ay qaataan tallaalka xoojinaya 5 bilood ka dib tallaalkooda ugu horreeya ee Pfizer-BioNTech.
Tallaalada Pfizer-BioNTech iyo xoojiyayaasha carruurta 5 ilaa 11 sano jir ayaa laga heli karaa Xarunta Caafimaadka ee Sadler maalmaha Khamiista inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah.
Cusbooneysii: Maarso 10, 2022
Qiyaasta Moderna 2 dhexda ayaa hadda lagu taliyaa 8 toddobaad marka loo eego da’da u dhaxaysa 18 – 64 sano jir. Kuwa loo arko inay halis sare yihiin iyo 65 sano jir iyo ka weyn ayaa wali lagula talinayaa inta u dhaxaysa 28 maalmood.
Xarunta Caafimaadka Sadler waxay leedahay maaskaro N95 ah iyo xirmooyinka baaritaanka guriga oo uu heli karo qof kasta oo jooga 100 N. Hanover Street, goobta Carlisle sida sahayda ugu dambeysa.
Cusbooneysii: Febraayo 1, 2022
Lacag la’aan guriga kaga hel baaritaanka COVID – 19
Guri kasta oo Mareykanka ku yaal wuxuu xaq u leeyahay inuu dalbado # 4 baaritaannada COVID-⁠19 ee guriga oo bilaash ah. Dalabka waxa lagu soo rari doona 7-12 maalmood gudahood. Dalbo imtixaanadaada hadda si aad u hesho marka aad u baahato, www.COVIDtests.gov .
Ma baadhitaannada antigen-ka degdega ah ee guriga, maaha PCR
Meel walba waa la qaadi karaa
Ku bixi natiijooyinka 30 daqiiqo gudahood (ma baahna in shaybaadhka la dhigo)
Ka shaqee haddii aad leedahay calaamadaha COVID-19 iyo haddii kale
Ka shaqee haddii aad ku cusub tahay tallaalladaada COVID-⁠19 iyo haddii kale
Waxa kale oo loo tixraacaa imtixaanada iskaa-wax-u-qabsiga ama imtixaanada miiska-ka-iibsiga (OTC).
Cusbooneysii: Janaayo 31, 2022
Maanta, Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka ayaa ansixiyay tallaal labaad oo COVID-19 ah. Tallaalka waxaa loo yaqaanay Moderna COVID-19 Vaccine; Tallaalka la ansixiyay waxaa loo suuq gayn doonaa sidii Spikevax si looga hortago COVID-19 ee shakhsiyaadka 18 jir iyo ka weyn.
Spikevax waxay la kulmeysaa heerarka adag ee FDA ee badbaadada, waxtarka iyo tayada wax soo saarka ee looga baahan yahay ansixinta.
Moderna COVID-19 Tallaalka waxa lagu heli jiray ogolaanshaha isticmaalka degdega ah (EUA) ee shakhsiyaadka da’doodu tahay 18 sano iyo wixii ka weyn ilaa Diseembar 18, 2020.
“Oggolaanshaha FDA ee Spikevax waa tallaabo muhiim ah oo lagula dagaallamayo masiibada COVID-19, taasoo calaamad u ah tallaalka labaad ee la ansixiyay si looga hortago COVID-19. Dadweynaha waxaa loo xaqiijin karaa in Spikevax ay buuxisay heerarka sare ee FDA ee badbaadada, waxtarka iyo tayada wax soo saarka ee looga baahan yahay tallaal kasta oo loo oggolaaday in lagu isticmaalo gudaha Mareykanka, ayay tiri Ku-simaha Guddoomiyaha FDA Janet Woodcock, MD
Cusbooneysii: Janaayo 5, 2022
Marka loo eego CDC, in la tallaalo oo lala socdo tallaalada COVID-19 waa habka ugu wanaagsan ee aad naftaada iyo kuwa kaleba uga ilaalin karto kala duwanaanshaha Omicron.
Intaa waxaa dheer, marka la eego waxa aan hadda ka ognahay COVID-19 iyo kala duwanaanshaha Omicron, CDC waxay soo gaabinaysaa wakhtiga lagu taliyey ee go’doominta dadweynaha. Dadka qaba COVID-19 waa inay karantiilaan muddo 5 maalmood ah oo haddii ay asymptomatic yihiin ama calaamadahooda ay xalinayaan (xummad la’aan 24 saacadood), raac 5 maalmood oo xidhashada maaskaro marka ay dadka kale ag joogaan si loo yareeyo khatarta ah inay qaadaan dadka ay la kulmaan. Isbeddelka waxaa dhiirigeliyay sayniska oo muujinaya in inta badan gudbinta SARS-CoV-2 ay dhacdo goor hore ee cudurka, guud ahaan 1-2 maalmood ka hor bilowga calaamadaha iyo 2-3 maalmood ka dib.
Intaa waxaa dheer, CDC waxay cusboonaysiinaysaa muddada karantiil ee lagula taliyay qof kasta oo ka mid ah dadweynaha guud ee la kulma COVID-19 . Dadka aan la tallaalin ama ka badan lix bilood ka dib qiyaasta labaad ee mRNA (ama in ka badan 2 bilood ka dib tallaalka J&J) oo aan weli la kicin, CDC waxay hadda ku talinaysaa karantiil 5 maalmood oo ay ku xigto isticmaalka maaskaro adag 5 maalmood oo dheeraad ah . Haddii kale, haddii karantiil 5-maalmood ah aysan suurtagal ahayn, waxaa lama huraan ah in qof qaawan uu xirto maaskaro si fiican u habboon mar kasta marka uu ag joogo dadka kale 10 maalmood ka dib soo-gaadhista. Shakhsiyaadka la siiyay tallaalka xoojinta uma baahna inay karantiilaan soo-gaadhista ka dib, laakiin waa inay xidhaan maaskaro 10 maalmood ka dib soo-gaadhista. Dhammaan kuwa qaawan, habka ugu fiican waxa kale oo ka mid ah baaritaanka SARS-CoV-2 ee maalinta 5 ka dib soo-gaadhista. Haddii astaamuhu dhacaan, shakhsiyaadka waa inay isla markiiba karantiiliyaan ilaa baadhis taban ay ka xaqiijinayso in calaamadaha aan loo nisbayn COVID-19.
Go’doomintu waxay la xiriirtaa dabeecadda ka dib caabuqa la xaqiijiyay. Go’doominta 5 maalmood oo ay ku xigto xidhashada maaskaro si fiican u habboon waxay yaraynaysaa halista faafinta fayraska dadka kale. Karantiilku waxa loola jeedaa wakhtiga soo socda la kulanka fayraska ama xidhiidhka u dhow ee qof la og yahay inuu qabo COVID-19. Labada cusbooneysiinba waxay yimaadaan iyadoo kala duwanaanshaha Omicron uu sii wado inuu ku faafo Mareykanka oo dhan wuxuuna ka tarjumayaa sayniska hadda jira goorta iyo inta uu qofku sida ugu badan u faafo. Talooyinkani kama beddelaan sharciyada gobolka, degaanka, qabiilka, ama dhulka, xeerarka, iyo xeerarka, mana khuseeyaan shaqaalaha daryeelka caafimaadka kuwaas oo CDC ay u cusboonaysiisay hagidda .
Xogta laga helay Koonfur Afrika iyo Boqortooyada Ingiriiska ayaa muujinaysa in waxtarka tallaalka ka hortagga caabuqa ee laba qiyaasood ee tallaalka mRNA uu yahay ku dhawaad 35%. Qiyaasta xoojisa tallaalka COVID-19 ayaa soo celisa waxtarka tallaalka ka hortagga caabuqa ilaa 75%. Tallaalka COVID-19 wuxuu yareeyaa halista cudur daran, isbitaal dhigga, iyo dhimashada COVID-19.
CDC waxay ku talinaysaa in qof kasta oo 5 jir ah ama ka weyn uu iska ilaaliyo COVID-19 isagoo is tallaalaya. Qof kasta oo da’diisu tahay 12 sano iyo ka weyn waa inuu la socdaa tallaalka COVID-19 oo uu qaato tallaal xoojin ah marka uu u qalmo.
Cusbooneysii: Diseembar 3, 2021
CDC waxay soo saartay tilmaantan soo socota ee qiyaasaha xoojinta dhammaan shakhsiyaadka 18 jir ama ka weyn ee helay taxanahooda aasaasiga ah ee Moderna ama Pfizer ugu yaraan lix bilood ka hor.
Shakhsiyaadka helay tallaalka Janssen sida qaddarkooda aasaasiga ah ugu yaraan laba bilood ka hor, hagidda CDC waxay ku talinaysaa qiyaas xoojin ah dhammaan shakhsiyaadka jira 18 ama ka weyn.
Shakhsiyaadka ayaa awood u leh inay go’aan ka gaaraan tallaalka ay qaadanayaan qiyaasta xoojinta ah. Shakhsiyaadka qaarkood ayaa laga yaabaa inay door bidaan inay helaan xoojiye nooc tallaal ah oo ay heleen sida taxanaha aasaasiga ah halka kuwa kalena ay doorbidi karaan inay helaan xoojiye kale. CDC waxay hadda ogolanaysaa isku-darka iyo isku-dhafka tallaalada ee caleemaha xoojiyaha.
Waxaan kugula talineynaa inaad kala hadasho bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga xaaladdaada caafimaad, iyo haddii qaadashada qiyaas dheeraad ah ay kugu habboon tahay. Si aad u hesho qiyaas xoojin ah oo ah tallaalka COVID-19 ee Xarunta Caafimaadka ee Sadler, waxaad ballan ka samaysan kartaa boggan, SadlerHealth.org/covid19/, naga soo wac (717) 960-6901, ama soo gal Isniinta ilaa Jimcaha inta lagu jiro saacadaha shaqada caadiga ah.
Cusbooneysii: Noofambar 2, 2021
Khamiista, Oktoobar 21keeda, 2021, Guddiga La-talinta CDC ee Dhaqannada Tallaalka (ACIP) ayaa soo saaray talo ku saabsan Moderna iyo Janssen qiyaasaha kobcinta ee kooxo gaar ah oo shakhsiyaad ah. Taladii markii dambe waxa saxeexay Agaasimaha CDC Dr. Walensky. Tani waxay dheer tahay taladii hore ee CDC ee qiyaasta xoojisay Pfizer.
CDC waxay soo saartay tilmaantan soo socota ee qiyaasaha xoojinta shakhsiyaadka helay taxanahooda aasaasiga ah ee Moderna ama Pfizer ugu yaraan lix bilood ka hor:
65 sano iyo ka weyn
Da’da 18+ ee ku nool goobaha daryeelka muddada-dheer
Da’da 18+ kuwaas oo leh xaalado caafimaad oo hoose
Da’da 18+ ee ka shaqeysa ama ku nool goobaha khatarta sare leh
Marka loo eego CDC, xoojiye ayaa hadda lagula taliyaa dhammaan saddexda tallaal ee COVID-19 ee laga heli karo Mareykanka. Shakhsiyaadka ayaa awood u leh inay go’aan ka gaaraan tallaalka ay qaadanayaan qiyaasta xoojinta ah. Shakhsiyaadka qaarkood ayaa laga yaabaa inay door bidaan inay helaan xoojiye nooc tallaal ah oo ay heleen sida taxanaha aasaasiga ah halka kuwa kalena ay doorbidi karaan inay helaan xoojiye kale. CDC waxay hadda ogolanaysaa isku-darka iyo isku-dhafka tallaalada ee caleemaha xoojiyaha.
Xarunta caafimaadka ee Sadler, waxaanu ku bixinaynaa tallaalada Moderna iyo Janssen. Haddii aad door bidayso inaad hesho xoojisay tallaalka Moderna, waanu ognahay inay tahay nus badeeco isku mid ah marka la barbar dhigo taxanaha aasaasiga ah.
Iyadoo la raacayo taladan, bixiyeyaasha, sida Xarunta Caafimaadka Sadler, ayaa isla markiiba bilaabi doona bixinta qiyaasaha xoojinta.
Cusbooneysii: Janaayo 21, 2021
Macluumaadka mareegahaan waa la cusboonaysiiyay Fadlan akhri gabi ahaan ka hor inta aanad nala soo xidhiidhin.
MUHIIM: Xarunta Caafimaadka Sadler waxa ay ka shaqaynaysaa in ay fidiso talaalka kuwa buuxiya shuruudaha hadda ee hab-raaca Waaxda Caafimaadka ee Pennsylvania. Sahaydeenu aad bay u xaddidan tahay wakhtigan. Waxaan bixin doonaa fursado dheeri ah oo tallaal ah waxaanan daabici doonaa ogeysiisyada marka helitaanka tallaalku uu kordho.
Cusbooneysii: Oktoobar 9, 2020
Waxaan u mahadcelineynaa dulqaadkaaga iyo iskaashigaaga inta aan sii wadeyno xaqiijinta heerka ugu sarreeya ee badbaadada shaqaalaha iyo bukaannada. Fadlan hoos ka eeg macluumaadka ugu cusboonaaday ee hababka loo sameeyo ballamaha, hubinta, iyo ay arkaan kooxdaada caafimaadka ama dhakhtarka ilkaha.
Kuwa soo socdaa waxay khuseeyaan qof kasta oo galaya Xarunta Caafimaadka Sadler wakhtigan:
Maaskaro ayaa looga baahan yahay qof kasta oo soo galaya dhismaha.
DHAMMAAN bukaannada iyo booqdayaasha (ay ku jiraan daryeel-bixiyeyaasha) waa inay lahaadaan baadhis heerkul ah markay soo galayaan dhismaha.
HAL booqde/daryeel bixiye ilmo kasta.
Dhammaan bukaannada waa inay ka jawaabaan su’aalaha baaritaanka calaamadaha. Haddii aad jirran tahay, fadlan guriga joog, waxaanu ku siin doonaa booqasho telefishan.
In aan ka badnayn LABA (2) walaalo ah qoyskiiba waa loo ogolyahay hal mar.
Adeegyada caafimaadka ayaa weli sii shaqaynaya. Fadlan horay u wac ballan iyo baadhis horteed ka hor inta aanad soo gelin. 717-960-4393
Waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad ku aragto bixiyahaaga caafimaadka onlayn adoon u baahnayn inaad soo gasho! Riix halkan si aad wax badan uga barato
Adeegyada ilkuhu waxay ku shaqaynayaan jadwal waxyar laga dhimay. Ma jiro socod la aqbali karo wakhtigan. Haddii aad la kulanto xaalad degdeg ah oo ilkaha ah oo aan nafta halis gelinayn fadlan wac 717-960-4394.
Cusbooneysii: Luulyo 15, 2020
Tijaabada COVID waxaa laga heli karaa Carlisle hadda, waxaana laga heli karaa Loysville laga bilaabo Luulyo 20. Fadlan wac 717-960-4393 si aad ballan u qabsato. Soo deji foomamka aad u baahan tahay halkan. Tijaabadu waa u bilaash bukaanka.
Cusbooneysii: May 29, 2020
Waanu ku mahad naqaynaa dulqaadkaaga iyo wada shaqayntiina markii aanu si tartiib tartiib ah dib ugu furnay awood buuxda. Inta lagu jiro nidaamkan, waxaan sii wadi doonaa inaan hubinno heerka ugu sarreeya ee badbaadada shaqaalaha iyo bukaanka. Waqtigaan, lama ogola bukaan socodka. Fadlan horay u wac ballan iyo baaris horre ah.
Adeegyada ilkuhu waxay wali ku jiraan xaalad deg-deg ah iyo daryeelka degdega ah iyagoo ballan ah oo keliya Carlisle (Isniin ilaa Jimce) iyo Perry (Isniin iyo Jimce) xafiisyada. Ma jiro socod la aqbali karo wakhtigan. Waxaan bilownay inaan la xiriirno bukaanada ballamihii hore loo qorsheeyay ee la baajiyay cudurka faafa dartiis si aan dib u jadwal u sameeyo. Haddii aad la kulanto xaalad degdeg ah oo ilkaha ah oo aan nafta halis gelinayn fadlan wac 717-960-4394.
Cusbooneysii: Abriil 30, 2020
Ilaa ogeysiis dheeri ah, waxaan xirmeynaa 5:00 galabnimo ee Khamiista. Dhammaan maalmaha kale waxay ahaan doonaan sideedii.
Cusbooneysii: Abriil 3, 2020
Booqashooyinka Khaaska ah Hadda waa la heli karaa!
Wac 717-960-4393 si aad u ballansato ballankaaga casriga ah.
U sheeg khadka ballanta inaad rabto inaad ballan ku sameyso booqasho toos ah.
Xaqiiji ciwaanka emailkaaga hadda
Waxaan kuu soo diri doonaa xiriiriye aad isticmaashid marka la gaaro waqtigii aad ballantaada internetka ku aadi lahayd.
Cusbooneysii: Maarso 19, 2020
Iyada oo la eegayo horumarka degdega ah ee isbeddelaya ee ku saabsan fayraska corona ee COVID19, oo dhaqan gal ah 3/18/2020 Xarunta Caafimaadka Sadler waxay qaadaysaa tillaabooyin ka baxsan taxaddarradayada caadiga ah si aan u hubinno badbaadada bukaannadayada, shaqaalahayaga, iyo bulshadayada.
Caafimaadka: Xaruntayada caafimaadka waxay sii ahaan doontaa mid furan. Dhakhaatiirtaada ayaa kula soo xiriiri doona ballamahaaga la qorsheeyay, waxayna go’aamin doonaan inaad u baahan tahay inaad shakhsi ahaan u timaado. NO soo-socod lama ogolaan doono inta lagu jiro wakhtigan. Haddii aad jiran tahay wac 717-960-4393 si aad ballan u qabsato.
Ilkaha: Sida ay ku taliyaan Ururka Ilkaha Maraykanka iyo Ururka Ilkaha ee Pennsylvania, dhammaan ballamaha ilkaha ee joogtada ah waa dib loo dhigi doonaa ilaa ogeysiis kale. Waxaanu wax ka qaban doonaa oo kaliya baahiyaha dhakhtarka ilkaha ee degdega ah inta lagu jiro wakhtigan xafiiskayaga Carlisle. Xafiiska degmada Perry waa la xirayaa. Marka COVID-19 uu dhaafo, waxaa lagugula soo xiriiri doonaa si aad dib ugu dhigto ballamahaaga. Haddii aad la kulanto xaalad degdeg ah oo ilkaha ah oo aan nafta halis gelinayn fadlan wac 717-960-4394.
Caafimaadka Dhaqanka: Tani waa xaalad aan horay loo arag oo nooga baahan inaan muujino adkeysi iyo naxariis. Haddii aad u baahan tahay taageero wakhtiyadan adag, fadlan kala xidhiidh la-taliyayaashayada caafimaadka dabeecadda Kristen iyo Rick 717-960-4387.
Adeegga Farmashiyaha s: Haddii aad la kulanto dhibaato dhaqaale oo aad u baahan tahay inaad hesho dawooyin la awoodi karo fadlan ka wac Theresa iyo Pam 717-960-4386.
Anagoo raacayna talooyinka gobolka iyo federaalka, waxaan waydiin doonaa dhammaan bukaanada la yimaada xaaladaha degdegga ah calaamad kasta oo ay yeelan karaan. Fadlan wac xarunta caafimaadka ka hor intaadan imaan 717-960-4393.
Fadlan iska ilaali inaad dad dheeraad ah u keento ballantaada, gelitaanku wuxuu ku koobnaan doonaa bukaanka iyo hal masuul ama daryeel bixiye. Waa in aan mid walba samayno waxa uu awoodo si aanu u xakamayno fiditaanka fayraska si aanu u ilaalino kuwa ugu nugul.
Si aad nala soo gaadho saacado kadib fadlan wac 717-218-6670. Dhammaan xaaladaha degdegga ah ee nafta halis gelinaya fadlan wac 9-1-1.
Waxaan fahamsanahay dhibaatooyinka ay tani ku yeelan karto bukaannadayada, waxaanan halkan u joognaa inaan ku taageerno, waxaan leenahay koox heegan ah oo ka shaqeynaya arrimaha murugsan ee habka ugu wanaagsan ee ficilka toddobaadyada soo socda.
Had iyo jeer caafimaadkaaga iyo badbaadadaadu waa mudnaantayada ugu sareysa waxaanan ku mahad naqaynaa fahamkaaga inta lagu jiro xaaladan soo kordheysa. Macluumaad dheeri ah ayaa halkan lagu dhejin doonaa sida la heli karo.
Xarunta Caafimaadka ee Sadler » Ogaysiisyada Adeegga COVID-19
© 2022 Xarunta Caafimaadka ee Sadler. Dhammaan xuquuqaha way xifdiyeen
Bayaanka Takoorka La’aanta